Dhageyso: Ra’iisal wasare ku-xigenka Mahdi Guleed “waxanu soo wadnaa Xisbigii Xisbiyada ah uu hogamnayo Madaxweynahena” – Walaal24 Newss
Shirkan oo qeyb ka ah wadatashiyada ay wadeen Guddiga madaxa bannaan ee Doorashooyinka Qaranka ee ku aadan Manhajka wacyigelinta iyo Waxbaridda Cod bxiyaha Doorashada islamarkaana socon doona muddo labo malamood ah ayaa Mas”uuliyiinta Guddiga,waxa ay la yeesheen Xisbiyada sida KMG ah loo idiwaangaliyay iyo kuwa hada ku guda jira is diiwaan gelinta.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dhawaan lagu dhawaaqi doono Xisbi Siyaasadeed uu hoggaamin doono Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxa uu sheegay in Xisbigaas uu noqon doono Xisbiga xisbiyada,isla markaana ka qeyb qaata doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan Sanadka 2020,hayeeshee muhiim ay tahay in xisbiyada kale ay la tartamaan.
Sikaftan ah ayuu u yiri Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar).
“Xisbiayda qaar ayaa ka dhawaajiyey in xukuumadda looga fadhiyo in ay xisbi dhistaan laakin waxaan soo wadnaa xisbi weyn uu hoggaamin doono hoggaamiye daacada ah oo dadku wada jecel yihiin ee farmaajo,waxan u sheegaya xisbiyada kale in uusan barqo cad wada uga tegine ee ha iska jiraan ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku xigeenka.
Halkan hoose ka dhageyso Ra’iisal wasare ku-xigeenka hadaladiisa:-
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka oo shir degdeg ah isugu yeeray madaxda Galmudug
Wasiir Goodax oo magaalada Muqdisho ka daah-furay mashruuca horumarinta waxbarashada